Guddiga dawlada Somaliya u saartey xajka oo war soo saaray - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Guddiga dawlada Somaliya u saartey xajka oo war soo saaray
Waxa in muddo ahba jirey arimo murgan o la xiriira sida loo maamulayo xajka maadaama ayna jirin diyaarad Somaliyeed oo xujaajta toos u geysa xaramka.
Hadaba war ka soo baxay guddi dhawaan ay magacowday xukuumadda Soomaaliya ee arrimaha Xajka ayaa soo saaray tirada Xujeyda sanadkan loo ogolaaday Soomaaliya ee tagaya Xajka.
Suldaan Cabdi Qani Qorane oo ka mid ah xubnaha guddiga oo warbaahinta u akhriyay qoraalka ka soo baxay guddiga ayaa sheegay in tirada Somaalida ee sanadkan loo ogolaaday in ay tagaan Xajka ay gaarayaan 11,500 ruux.
Waxaa kaloo uu intaa ku daray in 3-dii Bishan ay xukuumaddu go’aamisay in Shirkadaha ka qeyb galaya tartanka inay ku Shaqeeyaan nidaamka Xablooyinka oo hoostagaya marsada ayna ka qeyb galaan tartan furan oo loo siman yahay.
Waxaa uu intaa ku darray islamarkaana uu ka hadlay qodob ay ka walacsanaayeem Xujeyda oo ah qiimaha,waxaana uu sheegay in qiimaha Xajka ee sanadkaan uu yahay $3600 oo dollar halka qiimaha ugu sareeya ay tahay 5,000 oo Dollar.
Ugu danbeyntii waxaa uu sheegay in tartankii la galay ee shirkadaha ay ku guuleysteen 58 shirkadood isaga oo soo bandhigay Magacyada Shirkadaha diyaaradaha ee guuleystay.